बालबालिकामा मधुमेह, कसरी बच्ने ? | Nepalkakura
Home गृहपृष्ठ स्वास्थ्य बालबालिकामा मधुमेह, कसरी बच्ने ?
बालबालिकामा मधुमेह, कसरी बच्ने ?
वास्तवमा मधुमेहका हुनु कुनै ठुलो अथवा आत्तिनु पर्ने कुरा होइन तर समयमा नै ध्यान दिनु आवश्यक छ । हालसालै गरिएको एक अध्ययन अनुसार स्कुल जाने उमेरका बालबालिकाहरुमा मधुमेहको समस्या एक प्रतिशत हुने गरेको पाइन्छ । हालसालै भारतिय अभिनेत्री प्रिंयका चोपडाका श्रीमान निक जोनसले पनि आफु सानो हुँदा मधुमेहको चमेटामा आएको कुराको खुलासा गरेका छन् । उनी १३ बर्षको हुँदा उनलाई मधुमेह भएको थियो ।
आनुवांशिक अथवा परिवारको सदस्यमा पहिला नै मधुमेहको समस्या हुनु । जुन बालबालिकाको प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हुन्छ । मोटो बालबालिकामा पनि यसको खतरा धेरै हुन्छ । चिनी, चक्लेट र मिठाई धेरै मात्रामा सेवन गर्ने बालबालिकालाई मधुमेह हुने सम्भावना बढि हुन्छ ।
मधुमेहका कारण बालबालिकामा सुगर लेभल असामान्य रुपले बढ्छ, जसका कारण विभिन्न लक्षणहरु देखा पर्छ ।धेरै प्यास लागछ । धेरै भोक लाग्छ ।बालबालिका थाकेको अनुभव गर्छन् र सुस्त हुन्छन् ।बिना कारण शरीरमा कम्पन हुनु ।वजन कम हँदै जानु । धमिलो देख्न थाल्नु ,चोटपटक लाग्दा घाउ निको हुन समय लाग्नु आदि ।
शरीरमा इन्सुलिनको पूर्ति हुनु नै मधुमेहको विशेष उपचार हो, त्यसैले समयमा इन्सुलिन लिनु पर्छ ।समयमा ब्लड सुगर टेस्ट गराइरहनु पर्छ र त्यहि हिसाबले इन्सुलिनको मात्रा घटबढ गराउनु पर्छ ।समयमा नै खाना खाने बानी बसाल्नु पर्छ, साथै पौष्टिक आहार खुवाउनु पर्छ । रिफाइन्ड कार्बोहाइड्रेट, सुगर, मिठाई, मैदाको रोटी, पेस्ट्री, सोडा र जंक फूडहरु खान दिनु हँुदैन ।बालबालिकालाई पर्याप्त पानी पिउन लगाउनु पर्छ । उनीहरुलाई सोडा, जूस अथवा स्क्वाइस जस्ता ड्रिंकहरुबाट टाढा राख्नु पर्छ । बालबालिकालाई नियमित व्यायाम गर्ने बानी बसाल्नु पर्छ ।उनीहरुलाई इन्डोर भन्दा आउटडोर गेम खेल्नको लागि प्रोत्साहित गर्नु पर्छ । मधुमेह भएको बारेमा आफ्नो बच्चाको स्कूल टीचर, साथीहरुलाई जानकारी दिनु पर्छ, जसले उनीहरुले परेको समयमा उसको सहयोग गर्न सकुन् । अभिभावकले पनि समय-समयमा सुगर टेस्ट गराइरहनु पर्छ ।
Previous articleदेशभरका सार्वजनिक यातयातका साधानमा नेपाल भ्रमण वर्ष, २०२० अभियानको लोगो राखिने
Next articleकार्तिक २९ गते शुक्रबारको राशिफल